आवेदन विधि, को निर्देशन "Laktomun"। तयारी समीक्षा
आंतों समस्या को उपचार हाल विशेष व्यापक विशेषज्ञहरु र लोकप्रिय निर्माता द्वारा छलफल। लाभदायी जीवाणुहरु आधारित सबै योगों को microflora स्थापित गर्न मात्र होइन, तर पनि, यो कुर्सी पुनर्स्थापना राम्रो महसुस गर्न सक्षम छन् पछि, आराम को र यति मा एक भावना सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईंले यी लागूपदार्थ शरीर गरेको प्रतिरक्षा प्रतिरक्षाको वृद्धि भन्ने तथ्यलाई सम्झना गर्न सक्दैन। यस लेखमा तपाईँले एक यस्तो तयारी निर्देशन बताउँछ जानकारी पाउनुहुनेछ।
"Laktomun" - एक व्यक्ति स्वस्थ हुन र ठूलो महसुस गर्न मद्दत गर्छ जो लाभदायक सूक्ष्मजीवहरु एक सेट। बाटो मा तपाईं यसलाई मा प्रयोग गर्न पाउनेछ। यो पनि लायक उल्लेख छ चिकित्सा "Laktomun" समीक्षा के।
उत्पादन फारम। दबाइ को सामाग्री के के हुन्?
त्यो निर्देशन को उपभोक्ताहरु जानकारी? "Laktomun" - bifidobacteria र lactobacilli हुन्छन् कि एक चिकित्सा। यसले व्यक्ति पाचन पर्चा को सञ्चालन कायम गर्न आवश्यक छन् भनेर माइक्रो-जीव को पूर्ण सीमा छ भन्ने हो। उपकरण जो पछि तपाईं एक निलम्बन तयार छ एक पाउडर, रूपमा उपलब्ध छ। एक पाउच दबाइ को3ग्राम समावेश गर्दछ।
बाह्य, को पाउडर एक whitish-पहेंलो रङ्ग छ। निर्माता सानो रातो specks उपस्थिति अनुमति दिन्छ। यसरी सेतो रंग को dissolution पछि slurry प्राप्त। तयारी मा "Laktomun" मूल्य रूस मा 600 700 गर्न rubles देखि सीमा छ। तपाईं युक्रेन इलाका को एक भाग खरीद भने, पाउच 14 तपाईं खर्च हुनेछ 200 रिव्निया।
दबाइ प्राप्त गर्न एक नियुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने?
उपभोक्ताहरु को सङ्केत गर्छ बारेमा के जानकारी पुस्तिका जानकारी? "Laktomun" - जो को अधिग्रहण को लागि एक चिकित्सा छैन नुस्खा मा आवश्यक छ। भाग यो गवाही छ जो हरेक व्यक्ति सक्छन् लिन। डाक्टर दबाइ को contraindications वर्णन रूपमा बाहेक जो कोहीलाई पनि हानि गर्न सक्षम छैन भन्ने रिपोर्ट गरेका छन्। सारांश दबाइ निम्न अवस्थामा निर्धारित छ रिपोर्ट:
आंतों dysbiosis, र महिला मा योनी microflora उल्लङ्घन लागि;
जीवाणुरोधी लागूपदार्थ र himiosostavami संग उपचार समयमा;
भाइरल र जीवाणु आंतों lesion, पखाला सँगसँगै छ जो;
एक गम्भीर सुनिंनु र ग्यास उत्पादन समयमा;
विभिन्न मूल को एलर्जी।
"Laktomun" छोराछोरीलाई लागि: यो सम्भव छ?
दबाइ अक्सर छोराछोरीलाई प्रबन्ध छ। यस मामला मा, प्रयोग जीवनको पहिलो दिन बनाइएका हुन सक्छ। वर्णन लागूऔषधको प्रयोगले बच्चा चाँडै नयाँ अवस्था भिज्न अनुमति दिन्छ। पनि आफ्नो जीवन को पहिलो महिनामा शिशुलाई colic ग्रस्त। दवादारू "Laktomun" पाचन पर्चा microflora को प्रारम्भिक उपनिवेशवाद बढावा र gassing लक्षण को प्रभाव कम गर्छ।
को संरचना अधिकतम लाभदायक भिटामिन र पोषक अवशोषित गर्न अनुमति दिन्छ। कि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ किन हो , पहिले शिशुहरू पोषण बच्न र भविष्यमा आफ्नो साथीहरूको साथ भेट्टाउने क्षमता महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जो।
त्यहाँ कुनै पनि contraindications हुनुहुन्छ? प्रतिकूल प्रतिक्रिया
कि निर्देशन प्रयोग गर्न साइड इफेक्ट र सीमितता बारेमा भन्छन्? "Laktomun" - bifidobacteria र lactobacilli एक सेट को निर्वाचकगण एक चिकित्सा छ। यी पदार्थ सामान्य प्रत्येक व्यक्ति को पाचन पर्चा मा उपस्थित छन्। को संरचना को प्रयोग किन कुनै प्रतिबन्ध वा contraindications छ भन्ने छ। तथापि, डेयरी उत्पादन वा lactose घृणाको ती संवेदनशीलता संग उदाहरण, "Bifidumbacterin" को लागि, अन्य साधन चयन गर्न। यो उत्पादन को मूल्य $ वरिपरि 100 छ।
दबाइ सामान्यतया एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया कारण छैन र राम्रो सबै उमेरका उपभोक्ताहरु द्वारा सहन छ। तर, निर्माता पहिले दबाइ अधिमात्रा को मामला, बच्चा परिणामस्वरूप लिपिबद्ध दबाइ एक संवेदनशीलता विकसित भएको थियो भनेर भन्छन्। बच्चालाई पहिले थियो।
को पाउडर को आवेदन को विधि
यसलाई प्रयोग गरेर अघि संरचना भंग गर्न आवश्यक छ। यस को लागि दूध, रस वा शुद्ध पानी प्रयोग गर्न स्वीकार्य छ। तरल तातो हुनु हुँदैन। शिशुहरू दबाइ छाँटकाँट मिश्रण वा स्तन दूध मा पतला हुन सक्छ। तरल पदार्थ को मात्रा - 100 milliliters भन्दा कम। दवादारू जगाएर पछि 10 मिनेट बस्न गरौं। भोजन समयमा प्राथमिकताको भाग लिन।
औषधिको खुराक रोगी को उमेर मा निर्भर गर्दछ। बच्चाहरु एक दिन एक पटक आधा पाउच नियुक्त। प्याकेज खोल्दै, 24 घण्टा फ्रिज राख्नुहोस्।2वर्ष 1 शो पाउच एक पटक एक दिन पछि वयस्क र बच्चाहरु।
वर्णन दबाइ प्रयोग गर्ने मान्छे को समीक्षा
उपभोक्ताहरु पानी मा पतला को संरचना, एक बरु अप्रिय स्वाद छ रिपोर्ट। यो उपभोक्ता को दूध वा रस प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ किनभने यो छ। यस फारममा, धेरै सजिलो बच्चा गर्न चिकित्सा दिनुहोस्।
नवजात शिशुलाई को आमाबाबुले आफ्ना बच्चाहरु मा नियमित प्रयोग कम गंभीर colic लक्षण बन्न बताए छ। बच्चाहरु बिना वृद्धि ग्याँस र पीडा defecate गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चा को दैनिक आवेदन दुई हप्ता पछि यो धेरै राम्रो लाग्छ। बच्चाहरु प्रतिरक्षा बढ्छ मा, स्वास्थ्य फिर्ता सामान्य आउँछ।
सबै सकारात्मक कारण भए तापनि दबाइ, अनियन्त्रित छैन लग्नु गर्नुपर्छ। तपाईं डाक्टर बारी छैन भने, त्यसपछि ध्यानपूर्वक प्रयोगको लागि निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। उपचार र राम्रो परिणाम राम्रो भाग्य!
घोडा ओखर (tincture)। वोदका मा नुस्खा tincture
औषधि "Intetriks": बयान
तस्बिर शटका लागि मौलिक शरद तस्बिर
हाइड्रोलिक सिलेंडर र हाइड्रोलिक सिलेंडर को प्रकार
चिकन को स्वादिष्ट skewers तयार।
स्याउ, जाम र चिनी संग Curd खाम
Kanzashi राम्रो - कपडा र साटन रिबन बनेको फूल
क्रास्नायार्स्क विश्वविद्यालयहरु: तपाईंले तिनीहरूलाई बारेमा अरू के थाहा छ?
आक्षेप लागि मत्स्य पालन - एकदम राम्रो
एक आतंक आक्रमण के छ
फाइदा र माइक्रो / TransFlash प्रकार ड्राइव को बुरा
औषधि "Kalimin": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक